Warbixin: Seddex Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Arsenal & Liverpool Kulanka Caawa EPL-Ka Ee Emirates Stadium. | Hangool News
Warbixin: Seddex Meelood Oo Ay Ku Kala Badin Karaan Kooxaha Arsenal & Liverpool Kulanka Caawa EPL-Ka Ee Emirates Stadium.
August 14, 2016 - Written by Hangool
Horyaalka Premier League ayaa si rasmi ah u furmay xilli ciyaareedkiisa cusub shalayto, weli kulamadii koowaad ayaa lagu jiraa waxaa kulamada furitaanka ka mid ah kulanka culus ee ay caawa fiidkii garoonka Emirates Stadium kuwada ciyaarayaan kooxaha Liverpool iyo Arsenal. Hadaba waxaan eegi doonaa seddex meelood oo ay ku kala badin karaan labada kooxood.
Roberto Firmino vs Granit Xhaka
Dagaal xiiso leh ayaa ka dhici kara bartanka garoonka iyadoo saxiixa cusub ee Arsenal Granit Xhaka ay u badan tahay in loo xilsaari doono inuu wajaho xiddiga qaab ciyaareedka wanaagsan ku jira ee Liverpool Firmino, oo ka mid ah hubabka ugu halisisan ee ay Reds ku duusho.
Xiddiga reer Brazil ayaa noqonaya xiddig ka dhex muuqda Anfiedl, haddii uu la siiyo boos iyo waqti waxa uu soo bandhigi karaa kubad madadaalo leh, Arsenal ayaana dareemi karta awooda tayadiisa. Xhaka ayaa ku qasban inuu garab joogsado had iyo jeer inta ay ciyaarta socoto islamarkaana uu jahwareeriyo xiddiga khadka dhexe ee Reds.
Emre Can vs Aaron Ramsey
Dagaal kale oo khadka dhexe ayaa waxaa la filayaa inay soo baxdo laakiin waxa ay ku xiran tahay shaxda ay labada kooxood ku soo shirtagaan. Ramsey ayaa laga ciyaarsiin karaa booska weerarka khadka dhexe madaama uu Mesut Ozil maqan yahay, waxaana orodyada cajiibka ah ee uu ku sameyn karo daafacyada Liverpool gadaashooda ay dhibaato ku noqon kartaa kooxda Klopp.
Emre Can ayaa la filayaa inuu noqdo ninka sida Xhaka loo xilsaaro inuu maquuniyo awooda weerarka khadka dhexe ee Arsenal. Xiddiga Jarmalka ayaa xilli ciyaareedka kala duwan uu soo maray sannadkii hore, sidaasi darteed waxa uu dooni doonaa inuu xilli hore awoodiisa hogaamineed soo bandhigo oo uu burburiyo hubka weerarka ee Arsenal.
Coutinho v Bellerin
Waa dagaalka orodka ama haddii si kale loo dhigo waa sida Fast and Furious. Labada xiddig ayaa lagu yaqaanaa orodkooda oo ay kaga adkaan karaan qof kasta oo wajaha, laakiin kulanka maanta labadaan nin ayaa isku dayi doona inay is kansalaan dhan walba oo ciyaarta ah. Waan ognahay in Coutinho uu jecel yahay inuu ka soo xaroodo garabka halkii uu karoos soo dhigi lahaa, daafaca Arsenal ayaana qasban in dareenkiisa uu taagnaado waqtiyadaas oo kale. Bellerin ayaa ah xiddig orod badan oo kubadiisa difaaca u bedeli kara weerarka halka Coutinho uu ilbiriqsi gudaheed natiijo ku keeni karo sidaasi darteed waa dagaal muhim u ah ciyaarta maanta.